PEAR "DAYRTA YAKOVLEV": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA, SAWIRRADA IYO TAFAASIIL FAAHFAAHSAN - BEERTA
Noocyada kala duwan ee loogu talagalay Ruushka Central - pear "Dayrta Yakovlev"
Pear "Dayrta Yakovlev" waxay leedahay miro qurxoon oo qurux badan.
Dhex dhexaad u ah cudurada fungal iyo cayayaanka. Dhibaatada aadka u saameysay. Ma sarreeya.
Miraha xitaa isku dhejinta caws dhuuban.
Khudaarta Dayrta Yakovleva - kala duwanaanta dayrta oo leh nooc isku dhafan oo fruiting ah. Fasalada dhadhanka ayaa aad u sarreeya. Bannaanka loo yaqaan qiimayaasha miraha 4.9 dhibcood 5tii suurtagal ah.
Si noocyada dayrta waxay sidoo kale ka mid yihiin: Svetlyanka, qurxinta Talgar, Uralochka, Tyoma iyo Otradnenskaya.
Kala duwan ayaa leh tiro fara badan oo fitamiino iyo raad raac waxtar.
Pear waxa ku jira asaloyin dabiici ah, pectin, tannins, enzymes, sonkorta dabiiciga ah, wax soo saarka joogtada ah.
Miraha ayaa hodan ku ah fosfooraska, kalsiyum, cobalt, birta, silicon, potassium, copper.
Astaamaha guryaha sifaha kala duwan ee dayaxa Deyrta Yakovlev:
Sahara min 8.0 ilaa 9.0%
Acids laga bilaabo 0.07 ilaa 0.08%
Ascorbic acid min 11 ilaa 12 mg halkii 100 g.
Catechins laga bilaabo 38.0 ilaa 38.8 mg halkii 100 g.
Noocyo ku'saabsan ayaa la helay by dhexgalo noocyo. "Gabar Blancova ah" (Kala duwanaanta xilliga dayrta, fruiting on qaababka miro gaaban) iyo "Bergamote Esperen" (Kala duwanaanta Belgian leh miraha kareysa).
Noocyo asal ah GNU VNIIG iyo SPR iyaga. Michurin. Qorayaasha: Pavel Nikanorovich Yakovlev, Stanislav Pavlovich Yakovlev, Z. N. Tsvetaeva. Wide Darajada ayaa caan ka helay bogga dhexe.
Kala duwan ayaa ku haboon inay sii kordhaan bartamaha dhexe iyo bartamaha dhexe. Mararka qaarkood laga helo Siberia. Qaybiyay oo ku yaalla magaalooyinka Moscow, Yaroslavl, Ryazan. Waxay ku dhacdaa Belarus, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Estonia.
Fasalka waa mid aad u fiican cimilada cimilada ee qaaradda oo leh dabiicado khafiif ah.
Goboladan, noocyo of pears xasuusta of Jeglova, Tonkovetka, Janvarskaya, Hera iyo Cathedral ayaa si guul leh koray.
Pear "Dayrta Yakovlev": sharaxaadda kala duwanaanta iyo sawirrada
Dhirta noocyo kala duwan si dhakhso ah u koraya, waxay gaari kartaa dherer weyn 15 mitir. Waxay leedahay tuunbada, taajka. Weynu waa weyn yahay. Qaadashada dhirta dhirta waa mid fiican, waa mid aad u adag.
Kala duwanaantan ayaa leh heer aad u sarreeya oo ah sameyska sameynta. Tani waxay keeni kartaa manjooyin joogto ah oo adag iyo adkeyn weyn oo taajaj ah.
Fruiting iyo dhalidu waxay ku dhacdaa midhaha miraha, iyo sidoo kale stem stem.
Caleemaha geedka waa dillaac, qaro weyn, ballaaran. Hayso hooska madow iyo tiro yaryar ee misir. Caleemaha waxaa lagu dhajiyay calaamad ballaaran, farta lagu fiiqay iyo fardaha si sare ee geedka.
Saldhigga caleemaha waa nooc-qaabeeya. Xuubka ma aha mid aad u ballaaran, dhirbeelka waa qoyan gaaban. Iskuday Stipules waxaa ku jira foomka styloid.
Noocyada kala duwan waa degsiin sare leh xitaa marka la isku daro dhuuban dhuuban.
Wax-soo-saarka wanaagsan ayaa sidoo kale muujinaya noocyo kala duwan: Yakovlevskaya, Krasulya, Carruurta, Macmacaanka Rossoshanskaya iyo Muscovite.
Miraha waa ballaaran yihiin, leeyihiin qaab caadi ah caadiga ah ee qaab pear ah. Inta lagu jiro goosashada, midabka ugu weyn ee Hue emerald. Midabka daboolka waxaa lagu dhajiyaa qashin qurux badan dhinaca qorraxda.
Inta lagu jiro isticmaalka miraha, hooska ugu weyn waa caleemo-caaro. Daboolka waxaa ku jira tan tan fudud oo ah 1/4 miro. The stem of isteroberi waa dhexdhexaad ah ee size, qaro weyn, oo aan miridhku.
Koobku wuxuu leeyahay nooc furan. Foosto waa mid aad u yar, oo leh rikoodh yar. Wadnaha waa weyn, ukunta-qaabeeya. Sawirada waxaa lagu dhejiyaa noocyo xiran. Abuurka waxay yihiin kuwo waaweyn, oval, hooska madow.
Noocyada kala duwan ee Pear Yakovlev leedahay faa'iidooyin badan, ka dibna aad arki doonaa sawir ah midhaha iyo sharaxaad of kala duwan.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan pear ee kala duwan "Dayrta Yakovlev" ee sawirka hoose:
Kala duwanaanta noocaas ah waxa loola jeedaa sare-u-qaadista. Isaga miraha si joogto ah. Goynta ayaa sii socota ee tobanka sano ee sanadka.
Pear Yakovleva Autumn waa qayb ka mid ah noocyo is-bacrin ah, laakiin si loo helo wax soo saarka badan, aad dhigi kartaa tiro ah noocyo dheeraad ah ee pollinators Avgustovskaya ama Lada.
Marka kaydinta miro lagu kaydiyo dukaamada qashin qubka, waqtiga waqtiga macaamilka waxaa laga yaabaa in ay socoto ilaa 75 maalmood.
Kala duwan ayaa bilaabmeysa inay iskudhameeyaan 5 sano ka dib markii laga beerto geedo goynta.
Dhibaatada xilliga qaboobaha waxaa ku jira celcelis calaamadeed
U adkeysi qabow si looga yareeyo 25 darajo Celsius.
Waqtiga qaboobaha wuxuu u baahan yahay hoyga xilliga jiilaalka.
Noocyada iska caabbinta abaarta waa kuwo aad u sarreeya.
Bishii Maarso, waa inaad xoqdaa taajkii - Laamahii hore ayaa laga saaraa, inta soo hartay waa la soo gaabiyey. Nidaamkan noocan oo kale ah ayaa la sameeyaa si loo yareeyo koritaanka xooggan ee geedka iyo alwaaxda.
Tijaabinta tuunbadu waxay caawisaa kicinta habka lagama maarmaanka u ah dhismaha miro iyo burooyinkeeda cusub. Sidoo kale baahida loo qabo mooyaane waxay la jaanqaadaysaa burooyinkeeda ubax ee sannadkii hore. Way fududahay in la helo - waxay ku jiraan korniinka daaqaaga dilka ah.
Waxaa muhiim ah in la ogaado hubinta in dhalinyaradu ay horeba u awoodaan inay dhalaan wax soo saar sare. Pear ah ee kala duwan this, xitaa on ceyrsan khafiif ah afkoda, waxay bixisaa goosashada buuxda oo buuxa. Nidaamka hannaanka noocan ahi waa kaliya wuxuu xakamiyaa dhumucda taajka ah ee geedka.
Daryeelka roodhida iyo miirista geed
Kiimikada kala duwan wuxuu jecel yahay ciidda loamy. Xilliga xagaaga ee pear cimilada kulul waa in si aad ah loo waraabiyo.
In Sebtembar waa iskutallaab. Waxaa ku jira maaddooyinka lagama maarmaanka ah ee pear, iyo sidoo kale waxay ka difaacaan cudurrada.
Qoryaha qaawan waxaa lagu rinjiyey rasaasta birta cas.
Dabayaaqadii Abriil, waxay sameeyaan dhowr spray. Marka hore waxaa la soo saaraa inta lagu jiro soo nooleynta geedka iyo geedka.
Nidaamkani wuxuu ka takhalusaa cudurada fangas iyo cayayaanka. Mashiinka xiga waa la sameeyaa kaddib marka la sameeyo burooyinkeeda.
Diyaargarowgu waa ku haboon yahay in lagu buufiyo noocyada kala duwan. "Fury", "Strobe", "Inta badan-Vir".
Geedka ugu sarreeya
Bishii May, beeraley dhirta dhirta. Quudinta ugu wanaagsan ee noocyada kala duwan ayaa la tixgeliyaa HOL Marmar ayaa la isticmaalay sharoobada. Ha ilaawin waxyaabaha lagama maarmaanka ah mareellooyin.
Pear wuxuu leeyahay saameyn weyn copper sulphate iyo isku dar ah ee xal boric acid. Wixii geedaha bislaaday waxay isticmaalaan zaluzhenie. Iyada oo nidaamka noocan oo kale ah, weed waa in la daadiyo iyo wareegga-dhow ee goobada quudiyaan geed leh nitrogen.
Hannaankani wuxuu hagaajinayaa carrada, taas oo, ka dib quudinta, joojiso si ay u qalalaan cawska.
Mararka qaarkood Beerka ku dhex dar - waxay ka saartaa nitrojeerka xad-dhaafka ah ee dhulka. Inta lagu jiro xagaaga iyo dayrta, dhererka ayaa si fiican u burburiya oo sii daaya qaddarka loo baahan yahay nafaqooyinka geedka.
Kala duwanaanta kala duwan ee dayrta Axada Caovleva si dhexdhexaad ah u adkaysata cudurada fangas iyo cayayaanka, talooyinka beeralayda waayo-aragnimo oo dhan sida mid ka hadlaya daaweynta ka hortagga cudurada.
//selo.guru/ptitsa/bolezni-p/gribkovye/parsha.html waa la yaabay.
Si loola macaamilo in aan xanuunsaneynin qolof, waa lagama maarmaan in la isticmaalo geedo tayo sare leh ama gooyn laga soo qaado xanaanada marka la beerto.
Iyada oo qolof leh, midhaha ayaa gubay ama lagu aasay dhulka. Caleemaha ay saameysay waa qallajin, gebi ahaanba waxay seexanayaan carrada, guban ama la qaadaa fogaanta fog ee ka soo baxa miro iyo berriga.
Cadaadis u fidinta soo bandhigista: Rossoshanskaya qurux badan, Sverdlovchanka, Chudesnitsa, Bere Russkaya iyo Severyanka guduudan.
Xilliga dayrta, gaduudan waa in la jarjariyaa qoryaha caafimaadka leh, ka dibna way cad yihiin.. Dhulka dhulka ku wareegsan waa in si wanaagsan loo qodo. Nidaamkani wuxuu u dhaqaaqaa cayayaan fungus waxyeello moolalka, halkaas oo cayayaan noqonayaa geedaha pear khatar ah.
Sidoo kale, xalka khardal ayaa loo isticmaalaa ka soo horjeeda.. Laga bilaabo 50 ilaa 80 garaam oo budada ah ayaa lagu qasi karaa toban litir oo biyo diirran. Isku dar waxaa la kariyaa oo buufiyaa meel u dhow dhulka.
Nidaamkani si fiican ayaa loo qabtaa midig ka dib roobka. Waa ka fiican tahay in la soo saaro xilliga guga dambe ama xagaaga hore marka cudurka qaaxadu uu weli ka hortagi karo.
Natiijada Guga Pear Yakovlev waa kala duwanaansho heer sare ah oo leh fruiting xasilloon. Waxay leedahay midho qurux badan oo tayo leh.
Kala duwan ayaa leh khayraad faa'iido leh oo la taaban karo iyo raad raac. Dhex dhexaad u ah cudurada fungal iyo cayayaanka. Dhibaatada aadka u saameysay.
Wuxuu u baahan yahay daaweyn ka hortag ah oo ka dhan ah cayayaanka iyo manjooyin nidaamsan ee taajka. Xilliga hawada kulul, dhirta joogtada ah ee geedaha waa lagama maarmaan.